फोर्ब्सले सार्वजनिक ग¥यो विश्वका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सूची
२९८ प्रहरी हबल्दार बढुवा हुँदै
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका झण्डै तीन सय जना प्रहरी हबल्दारहरू असईमा बढुवा हुने भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनपद प्रहरीतर्फका २९८ जना हबल्दारहरूलाई ‘सहायक निरीक्षक’ असईमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । बढुवा समितिको शनिबार बसेको बैठकले २९८ जना हबल्दारको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रहरी नायव
महेन्द्रनगरबाट प्यूठानका लागि छुटेको बस दुर्घटना : ५ जनाको मृत्यु
भीमदत्तनगर, ३० वैशाख- कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट प्यूठानका लागि शनिबार छुटेको यात्रुवाहक बस आज बिहानै दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । आज बिहान करीब ३ बजे प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका–४ पाकुरी भन्ने स्थानमा प्यूठानका लागि छुटेको ना ४ ख १८७६ नम्बरको बस भीरबाट खस्दा पाँच जनाको
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २ दिने नेपाल भ्रमण सफलःसरकार
काठमाडौं । सरकारले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २ दिने राजकीय नेपाल भ्रमण सफल र ऐतिहासिक भएको दाबी गरेको छ । शुक्रबार जनकपुरबाट सुरु मोदीको भ्रमण ऐतिहासिक भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । शनिबार मोदीलाई विदाइ गर्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका ज्ञवालीले भ्रमण धेरै दृष्टिले
के–केमा सहयोग गर्छ भारतले ?
काठमाडौं । २ दिने राजकीय भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार साँझ भएको भेटवार्तामा ५ बुँदे सहयोगको प्याकेजमा सहमति भएको छ । दुई समकक्षीबीच काठमाडौंको होटल द्वारिकाज भएको ‘वान टु वान’ वार्तापछि सहयोग प्याकेजमा सहमति
टुँडिखेलमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘गार्ड अफ अनर’
काठमाडौं । दुइ दिने नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सरकारले ‘‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको छ । शुक्रबार सैनिक मञ्च टुंडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा मोदीलाई नेपाली सेनाको टुकडीले ‘गार्ड अप अनर’को सलामी अर्पण गरेको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
जनकपुरको विकासका लागि मोदीले गरे १०० करोड सहयोगको घोषणा
जनकपुर । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रदेश नं २ को विकासका लागि १०० करोड सहयोगको घोषणा गरेका छन् । २ दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रबार जनकपुरको बाह्रविघा मैदानमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले सहायता दिने घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा आफू भारतीय प्रधानमन्त्रीको
मोदीलाई जनकपुरमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत
जनकपुर । २ दिने दिने भ्रमणमा नेपाल आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा स्वागत गरेका छन् । ढाका टोपी र कुर्ता,पाइजामामा सजिएका ओलीले उस्तै पोशाकमा आएका मोदीलाई जानकी मन्दिर परिसरमा स्वागत गरेका हुन् । ओलीले स्वागत गरेपछि मोदीले जानकी मन्दिरमा
मोदीको भ्रमणको विरोध गर्नुको तुक छैनः डा. भट्टराई
काठमाडौ । भारतका प्रधानमन्त्री नेरन्द्र मोदीको भोलिबाट हुने नेपाल भ्रमणको विरोध गर्नुमा कुनै तुक नभएको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता एवम् नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य डा. राजन भट्टराईले बताएका छन् । मोदीलाई जनकपुर र काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दन गर्न कसैले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण
अब कसैले सिण्डिकेट गरे जेल हाल्छौंः मन्त्री यादव
काठमाडौं/उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले अब कुनैपनि किसिमको सिन्टिकेट बाँकी नरहेको भन्दै कसैले यदि त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा ती व्यक्तिलाई सिधै हाल्ने बताएका छन् । आफ्नो मन्त्रालय र माताहातका कुनैपनि निकायमा त्यस्तो सिन्डिकेट सधैंका लागि अन्त्य गर्ने स्पष्ट उनले स्पष्ट
काठमाडौंका लेखक खप्तडमा
काठमाडौं/सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तडमा वृहत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवम् आध्यात्मिक महोत्सव भइरहेको छ । नेपाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा भइरहेको सो महोत्सवमा भारत, नेपालका विभिन्न कवि, चिन्तक, योगी एवम् धार्मिक व्यक्तित्वको सहभागि भइरहेको छ । त्रिवेणी महास्नान, कवि
अमरवाणी संवाददाता /काभ्रे । पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयका निम्ति शिक्षा नीति निर्माण कार्यको थालनी गरेको छ । नगरपालिकामा शैक्षिक अन्र्तक्रिया गरेर नीति निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलको सभापतित्व र शिक्षाविद् जनार्दन नेपालको
मोदीको भ्रमण सफल बनाउन सरकार लागिपरेको छः सापकोटा
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण सफल बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता सापकोटाले मोदीको भ्रमण सफल बनाउन
गोरखापत्र ११८औँ वर्षमा
काठमाडौँ । गोरखापत्र दैनिक सोमबारबाट ११८औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १९५८ वैशाख २४ गतेबाट साप्ताहिक रूपमा ‘गोर्खापत्र’को प्रकाशन सुरु भएको थियो । विभिन्न समयमा परिस्कृत तथा परिमार्जित हुँदै गोरखापत्र अहिलेको अवस्थामा आएको हो । गोरखापत्र प्रकाशनको ११८औँ वर्ष प्रवेश तथा गोरखापत्र संस्थानको ५६औँ वार्षिकोत्सवका
एजेण्डा मिल्नेसँग कार्यगत एकता : नयाँ शक्ति
काठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले मुद्दा वा एजेण्डा मिल्नेहरूसँग कार्यगत एकता गर्ने बताएको छ । आइतबार उक्त पार्टीले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दे नयाँ शक्तिसँग मुद्दा वा एजेण्डा मिल्ने जोकोही सँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएको हो । जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मुद्दा वा एजेण्डा मिल्नेहरूसँग
मृत्युदण्ड सुनाइएका यादवलाई ब्लडमनीे आवश्यक
काठमाडौँ । विगत १२ वर्षदेखि साउदी जेलमा रहेका धनुषा जिल्ला कमला नगरपालिका माची झिट्कैयाँ वडा नम्बर ४ का उमेश यादवलाई त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समाजसेवी सरोज रायले पत्रकार सम्मेलन गरेर विगत १२ वर्षदेखि साउदी अरेबियाको जुबेल जेलमा रहेका ३८ वर्षीया यादवको
काबुलमा कार्यक्षेत्रमै गोली हानी मारिएका पत्रकारको सम्झना
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । गत सोमबार अफगानिस्तानको काबुलमा आत्मघाती बम हमलाबाट मारिएका पत्रकारहरूको सम्झनामा नेपाल पत्रकार महासंघ र फोटो जर्नलिष्ट क्लब नेपाल (पिजे) को संयुक्त आयोजनामा बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरेको छ । दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका
बालबिवाह विरुद्ध सञ्चार अभियान सुरु
काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित सीआइएनले बालबिवाह विरुद्धको सय दिने सञ्चार अभियान सुरु गरेको छ । राजधानीम पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआइएनका प्रमुख दीपक आचार्यले सय दिनमा रेडियो मार्फत बालविवाह अत्यका लागि १० हजार व्यक्तिको
मोदीको स्वागतमा ५० हजार मान्छे उतार्न सर्कुलर !
काठमाडौं । नयाँ पत्रिका दैनिकले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा जनकपुरमा भव्य तयारी भइरहेको समाचारलाई प्रमुखताका साथ छापेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार मोदीको सम्बोधन गर्ने सभामा ५० हजार मान्छे उतार्न प्रदेश सरकारले आठ जिल्लामा सर्कुलरसमेत गरेको छ । मोदी यही वैशाख २८ गते पटनाबाट सीधै
वाम एकता अप्ठ्यारो मोडमा
काठमाडौं । राजधानी दैनिकमा एमाले-माओवादी एकता अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको समाचार छ । एकता प्रक्रिया दुई पार्टी अध्यक्षमै पुगेर अड्किएको छ । यसअघि एकता घोषणा मितिसमेत तय गरेका दुई दलबीच पछिल्ला दिन एकता प्रक्रिया अप्ठ्यारो मोडमा पुगेर अड्किएको छ । विवादित विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष
हुम्ला जिल्ला अस्पताल भू-क्षयको जोखिममा
दाने बोहरा/वैशाख । जिल्ला अस्पताल सिमकोटको दक्षिण भागमा पर्ने पाखेमा सिमकोटका स्थानीयले जथाभावी ढुङ्गा तथा बालुवा निकाल्दा जिल्ला अस्पतालमा भू–क्षय हुने जोखिम बढेको छ । स्थानीय बासिन्दाले ४ वर्षदेखि बिक्रीका लागि ढुङ्गा र बालुवा निकाल्दै आएका कारण अस्पताल क्षेत्र जोखिममा परेको हो । अस्पतालको
युवाकवि गीता सापकोटाको कवितासङ्ग्रह 'भान्से बाहुनी' सार्वजनिक
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । युवाकवि गीता सापकोटाद्वारा लिखित कवितासङ्ग्रह ‘भान्से बाहुनी’ लोकपर्ण गरएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच प्रा.डा.वासुदेव त्रिपाठीले सङ्ग्रहको लोकपर्ण गरे । उक्त सङग्रहको साहित्यकार डा.रामप्रसाद ज्ञवालीले सङ्ग्रहको कमजोर र बलिया पक्षहरू केलाए । त्यस्तै वरिष्ठ
गीतकार डा.ज्ञवालीको ‘आशय’ एल्बम सार्वजनिक
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । राष्ट्रिय जागरणको भाव समेटिएको गीति एल्वम ‘आशय’ विमोचन गरिएको छ । राजधानीमा सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गीतकार डा.रामप्रसाद ज्ञवालीद्वारा रचित र दामोदर अधिकारीको गायन तथा संगीत रहेको उक्त एल्वम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, जनवादी
सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ होइन भने जागिर छाडे हुन्छ : मन्त्री पण्डित
लुम्बिनी। संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशाशनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले तोकेको ठाउँमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी जानुपर्ने बताए। मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जागिर खाने बेलामा सरकारले तोकेको जुनसुकै ठाउँमा पनि जान्छु भनेर शपथ खाएको स्मरण गराउँदै सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई
ग्याँस बुलेट पल्टिदा चालकको मृत्यु
धादिङ । धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नं २ मलेखु नजिकै त्रिशुली नदिमा शुक्रबार बिहान ग्याँस बुलेट पल्टिदाँ चालकको मृत्यु भएको छ । काठमाडौँ जाँदै गरेको एचआर ५५ क्यु ८६३० नम्बरको लोड ग्याँस पल्टिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गजुरीले जानकारी दिएको छ । मृत्यु हुनेमा भारत घर भएका ३६ वर्षीय सुरेन्द्र
नेपाल भ्रमणमा आफ्नै कार ल्याउँदैछन् मोदीले
काठमाडौं । चीन भ्रमण सकेको ११ दिनमा नेपाल आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नै कार ल्याउने भएका छन् । भारतीय सेनाको विमान काठमाडौं उत्रिनु तीन दिन अघि नै उनी चढ्ने कार काठमाडौं र जनकपुर आइसक्नेछन् । उनी विशेष प्रकारको कार प्रयोग गर्छन् । आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ । आन्तरिक उडानका
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्नेबारे अहिले दलहरुले आ–आफ्नै धारणा राखेपनि आफूहरु त्यस्ता सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले दलहरुले ‘गुड फेथ’ राखेर छलफल गरिरहनुभएको छ, तर हामी चाहीँ अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा छौं,
गृहमन्त्रालयले ६० सिडिओको सरुवा गर्‍यो (सूचीसहित)
काठमाडौँँ – गृहमन्त्रालयले ६० जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको छ । गृहले विहीबार सहसचिव र उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो। सरुवा सूची अनुसार काभ्रेका शिव शिंखडालाई प्रशासन कार्यालय हेटौँडा, भक्तपुरका द्रोण पोखरेललाई सर्लाही, चितवनका नारायणप्रसाद भट्ट भक्तपुर, बर्दियाका नारायणप्रसाद
१० हजार युवालाई मार्क्सवाद रटाउँदै एमाले–माओवादी !
काठमाडौँ । कार्ल माक्र्स जन्मको द्विशतवार्षिकी समारोह समितिले १० हजार युवालाई माक्र्सवाद पढाउने भएको छ । एमाले–माओवादी केन्द्रलगायत चार कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित समितिले युवामा मार्क्सवादप्रति अभिरुचि घट्दै गएकाले पढाउने निर्णय गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । माक्र्स जयन्तीको द्विशतवार्षिकीको